- National Archives Of Myanmar
Archives Reference National Essence
Groups of Records and Archives
အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)တွင် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်အတွင်း ဆောင်ရွက်မည့် မော်ကွန်းမှတ်တမ်းများအား ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့် သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် National Archives Information ...
(၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတု လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဝန်ကြီးဌာန အဆင့် ပြခန်း ပြသနိုင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၂) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပ
(၇၅)နှစ်မြောက် စိန်ရတုလွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဝန်ကြီးဌာနအဆင့်ပြခန်းပြသ နိုင်ရေး လုပ်ငန်း ကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၂) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား အမျိုးသားမှတ်တမ်းများ မော်ကွန်း တိုက်ဉီးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် (၂၆-၄-၂၀၂၂) ရက် ...
အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို ( ၁၄ - ၂ - ၂၀၂၂ ) ရက်နေ့၊ နံနက် ( ၁၁ : ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ ...
ဝန်ထမ်းသစ်များ ရုံးလုပ်ငန်းအခြေခံ၊ မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် မှတ်တမ်း/မော်ကွန်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ၏ အခြေခံသဘောတရားများ သိရှိ နားလည်စေရန် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင ...
အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (အခြေခံ) ဖွင့်လှစ်ခြင်း
ဌာနတွင်းရှိဝန်ထမ်းများ လုပ်ငန်းစီမံဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ မှတ်တမ်းနှင့်မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှု (အခြေခံ) သင်တန်း၊ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၀-၁၂-၂၀၂၁) ရက်နေ့ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖ ...
အမှုထမ်း (၂၇) နေရာတွင် ရွေးချယ်ခံရသူများ၏ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း။
၁။	စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစာနှုန်းကျပ် (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူးရာထူး နေရာ၊ လစာနှုန်းကျပ်(၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀)မော်ကွန်းထိန်းလ ...
အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများအား မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းမှု အသိပညာပေးရန်အတွက် မှတ်တမ်းနှင့် မော်ကွန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့်ပွဲကို ( ၂၂ - ၁၁ -၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၊ နေ့လည် ( ၁ : ၀၀ ) နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွ ...
အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(ရန်ကုန်ရုံးခွဲ)စာစစ်ဌာနတွင်ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
အမျိုးသားမှတ်တမ်းများမော်ကွန်းတိုက်ဦးစီးဌာန(နေပြည်တော်)စာစစ်ဌာနတွင်ဒုတိယဦးစီးမှူး(မှတ်တမ်းပြုပြင်ရေးမှူး) ရာထူးနေရာအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
Definition of Records and Archives Archives Law Archives Norms (11) Researcher Guide
Myanmar National Archives Department
Subscribe is successfully.
Definition of Records and Archives
Archives Norms (11)
National Archives Department (Nay Pyi Taw)
Ph : +95-67-418386
Fax : +95-67-418376
National Archives Department (Yangon)
No.114, Pyidaungsu Yeiktha Road,
Ph : +95-1-370778
Fax : +95-1-395002
© 2022 The National Archives Myanmar., All Rights Reserved.
Please read these Terms and Conditions ("Terms", "Terms and Conditions")carefully before using the www.nais.gov.mm website(the "Service") operated by Myanmar National Archives Department ("us", "we", or "our").
By accessing or using the Service your agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.
Certain areas of this Website are restricted from being access by you and Myanmar National Archives Department may further restrict access by you to any areas of this Website, at any time, in absolute discretion. Any user ID and password you may have for this Website are confidential and you must maintain confidentiality as well.
In these Website Standard Terms and Conditions, “Your Content” shall mean any audio, video text, images or other material you choose to display on this Website. By displaying Your Content, you grant Myanmar National Archives Departmentanon-exclusive, worldwide irrevocable, sub licensable license to use, reproduce, adapt, publish, translate and distribute it in any and all media.
Your Content must be your own and must not be invading any third-party's rights. Myanmar National Archives Department reserves the right to remove any of Your Content from this Website at any time without notice.
This Website is provided “as is,” with all faults, and Myanmar National Archives Department express no representations or warranties, of any kind related to this Website or the materials contained on this Website. Also, nothing contained on this Website shall be interpreted as advising you.
These Terms constitute the entire agreement between Myanmar National Archives Department and you in relation to your use of this Website, and supersede all prior agreements and understandings.
These Terms will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of the Union of Myanmar, and you submit to the non-exclusive jurisdiction of the state and federal courts located in the Republic of the Union of Myanmar for the resolution of any disputes.